बाबुरामको षड्यन्त्र, दिउशो भष्मासुर राति ओली शरणम ! किन दौडे राती राति बालुवाटार ? – Sanghiya Online
बाबुरामको षड्यन्त्र, दिउशो भष्मासुर राति ओली शरणम ! किन दौडे राती राति बालुवाटार ?
Posted on : May 16, 2021 May 16, 2021 - No Comment
सन्जिब यादब / बिदुर पौडेल
जनता समाजबादी पार्टी नेपालका दुइ अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुइ खेमामा विभाजित भैरहेकै बेला अर्का संघिय परिषद अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई भित्र भित्रै प्रधानमन्त्री ओलीकै शरणमा गरेका छन् । बाबुराम तिर ध्यान नै नदिने अध्यक्ष यादबलाइ बाइ पास गर्दै भट्टराई चुपचाप बालुवाटार गएका हुन् । उनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेकाले सहयोग गर्न ओलीलाई अपिल गरेको स्रोतको दाबी छ । यता जसपा नेपालका नेताहरुले समेत पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी कन बाबुराम सुटुक्क बालुवाटार पुग्नुमा आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
किन गए बाबुराम बालुवाटार ?
स्रोतका अनुशार प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाइँ संग बहुमत नभएका कारण मलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुस भनेर अपिल गर्न बाबुराम बालुवाटार गएका हुन्। तर ओलीले आफु आपसी बिबाद मिलाउन लागि परेकोले उल्टै मलाइ सहयोग गर्नुस भनेका थिए। आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने निश्चित भएपछी बाबुराम ट्विट मार्फत रिशले भनेका थिए – त्यसो भए प्रधानमन्त्री बनिसकेको कोहि पनि फेरी प्रधानमन्त्री नबनोस । र नबनेका प्रधानमन्त्री बनाऔ । स्मरण रहोस त्यहि भट्टराईले ओलीलाई भासमासुरको संज्ञा दिएका थिए । तर बिना जानकारी चुप चाप बालुवाटार गएको बाहिर आएपछि उनले फेरी ट्विट गर्दै पूर्ब प्रधानमन्त्रीको हिसाबले गएको बताएका छन् । पूर्ब प्रधानमन्त्रीको हिसाबले के ओलीले भट्टराईलाई बोलाएका थिए त ?
बाबुराम भट्टराई त्यहि नेता हुन् जसले पार्टीलाई बिना जानकारी बिना कुनै निर्णय पटक पटक गोप्य रुपमा प्रचण्डलाइ पार्टी एकताका लागि भेट्दै आएका छन् । सुरुमा हल्लाको रुपमा लीएको त्यो पार्टी एकताको कुरालाई राष्ट्रिय दैनीक हरुले समेत समाचार बनेपछि मात्र आफ्नै पार्टीका नेताहरुले थाहा पाएका थिए। तर त्यति थाहा हुँदा हुँदै उपेन्द्र सहीत नेताहरुले न त बाबुरामलाइ कारवाही नै गरे न त स्पष्टीकरण नै सोधे। तर राति को ठाउमा दिउसो बैठक गरेको अर्का अध्यक्ष ठाकुरलाई कारवाही गर्ने समेत उपेन्द्र पक्षको दाबी रहेको छ । स्रोत भन्छ – ” आफ्नो पार्टी बचाउन उपेन्द्रले पूर्वको राजपा संग पार्टी एकता गरेपनि भित्र बाट त्यो एकता उपेन्द्रले स्विकार्न सकेको छैन र उनि आफै पनि पार्टी फुटाउन चाहन्छन ।
फोरमको बारेमा बढी नबोल्न नेता कार्यकर्तालाई राजपाको चेतावनी, प्रदेश २को सरकार नछाड्ने
माधवनारायण नगरपालिकामा २५ बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष तयार ।